ARIMAHA JACAYLKA:-MAXAAD KA TAQAANAA JACAYL? Maxaase Daawo U Ah? Goorma Ayaa La Dareema Jacaylka - Hablaha Media Network
ARIMAHA JACAYLKA:-MAXAAD KA TAQAANAA JACAYL? Maxaase Daawo U Ah? Goorma Ayaa La Dareema Jacaylka
HMN:- Run ahaantii jaceyl waa ereyga ku soo noq noqda in badan qalbiyada dadka Majiraa jaceyl mise ma jiro? Waa wax jira jirina doona inta ay dunidani dhisantahay waana dareen ku lamaansan jiritaanka nolosheena waayo qof walba wax ayuu ka helaa akhristoow! Ka hadalka jaceylka ama faalooyinkiisu aad ayey u badan yahin lakin hadii aan ku noqdo
1-mataha qof nolosha jecel ?